नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सर्वसाधारणले देशभर म’नाए खुशियाली,हामी पनि शेयर गरि सरिक बनौ ! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
नयाँ नक्सा संसदबाट सर्वसम्मतिले पारित भएपछि सर्वसाधारणले देशभर म’नाए खुशियाली,हामी पनि शेयर गरि सरिक बनौ !
काठमाडाैँ – प्रतिनिधिसभाले निशानछापमा नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रयोग गर्ने विधेयक पारित गरेपछि देशभर खुशियाली मनाइएको छ `। निशान छापमा नयाँ नक्सा राख्न संसदमा प्रस्तुत भएको संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएपछि उपत्यकासहित देशभर खुशियाली मनाइएको हो `।
लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु’लेक क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई शनिबार निशान छापमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धि विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत पास गरेको छ । `योसँगै उपत्यकाको माइतिघर मण्डला लगायतका ठाउँहरुमा उ’पस्थित सर्वसाधारणहरुले सडकमा नेपालको नक्सा बनाएर खुशियाली मनाएका छन्।
यस्तै नुवाकाेटमा पनि सर्वसाधारणले नेपालकाे नक्सा बनाएर खुशियाली मनाएका छन् । `प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित २ सय ५८ जना सांसदहरुले संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए ।
Previous बलिउड अभिनेता सुशान्तसिंह राजपुतले गरे आ’त्मह,त्या !
Next खुशीको खबर : बंगलादेशमा अ’ल-प’त्र परेका २ सय ५८ नेपालीलाई स्वदेश ल्याइयो…हेर्नुहोस् ।